गुनगुना, घातक गुर्दे ट्यूमर - लक्षण र उपचार, आहार र पुन: पुनर्निर्माण पछि गुर्दे को क्यान्सर ट्यूमर संग
गुर्दे को ट्यूमर - बेनाग र घातक प्रजातिहरु
जब कक्षले विशेषज्ञता गर्ने क्षमता गुमाउँछ र अनियमित रूपमा साझेदारी गर्न थाल्दछ, नयाँ स्थानीयकरणको स्थानीयकरणको क्षेत्रमा देखा पर्दछ। गुर्देहरूमा तिनीहरू दुर्लभ हुन्छन् तर धेरै खतरनाक मानिन्छ। यस्तो संरचनाहरूको सही उपचारको लागि, यो सही तरिकाले र समयमै निदान गर्न महत्त्वपूर्ण छ, सेलुलर क्लस्टरको प्रकृति निर्धारण गर्नुहोस्।
रेनल ट्यूमर - वर्गीकरण
यस अंगमा लगभग90 पत्ता लगाउन नसकिनेसहरू घातक छन्। गुर्दे ट्यूमर को प्रकार बदलन को कम खतरनाक हुन सक्छ, किनकि तिनीहरू तीव्र विकास र विस्तार को शिकार हुन्छन्। यसले निस्सन्देह प्रहार गर्दछ र रक्त वाहिकाहरूलाई पछिल्लो क्षति, मूत्र प्रणालीमा तंत्रिका समाप्ति, आन्तरिक रगत र तीव्र दुखाइको कारण हुन्छ।
गुर्देको अर्को ट्यूमर यसको उत्पत्ति - पर्ेनचिमा वा पिल्विस अनुसार वर्गीकृत गरिन्छ। पहिलो अवस्थामा, निम्न घातक ढाँचाहरू ज्ञात छन्:
रेनाल सेल क्यासिनोमा;
मिश्रित विल्म्स ट्यूमर;
शरारती ट्यूमर पोल्विस बाट बढ्दै जान्छ:
squamous सेल कार्सिनोमा;
भित्री ग्लानुलर क्यान्सर;
संक्रमणकालीन सेल क्यार्सिनोमा।
गुर्दे को ट्यूमर - लक्षण, लक्षण
नेप्लस को विकास को शुरुवात मा, नैदानिक ​​अभिव्यक्ति अनुपस्थित या यति अपरिहार्य छ कि उनि बिना ध्यान रहन रहछन। उनीहरूलाई अवलोकन गरिन्छ जब गुर्दे ट्यूमर प्रगति गर्दछ र साइजमा बढ्छ - लक्षणहरू अनौपचारिक हुन सक्छन् र अन्य रोगहरू जस्तै हुन सक्छन्। लुम्बेर क्षेत्रमा सानो मात्रामा असुविधा को उपस्थिति संग, यो निदान को लागि तत्काल एक नेफोलोजिस्ट देखि परामर्श गर्न महत्वपूर्ण छ।
गुर्दे ट्यूमरलाई हराउनुहोस्
नेपोलसम्सको वर्णित समूहमा कुनै पनि चिन्हको साथ कम्तीमा नै कम हुन्छ, अत्यावश्यक रूपमा उनी अल्ट्रासाउन्डको समयमा गलती पत्ता लगाउँछन्। एक ठूलो क्लिनिक चित्र पेश हुन सक्छ यदि एक ठूलो बेनाग गुर्दे ट्यूमर भएको छ भने - लक्षणहरू:
तीव्र उच्च रक्तचाप;
एक दुखाइमा दुखाइ वा दुखाइ दुख्ने, अक्सर प्राय जांघमा मार्ने गर्दछ।
मूत्र को बहिष्कार को उल्लंघन।
कहिलेकाहीँ गुर्दे ट्यूमर यस्तो आकारमा पुग्छ जुन यो दृश्यात्मक रूपमा देखिने छ। यो छालाको सतह माथि फैलिएको एक टक्कर जस्तो देखिन्छ। बेनिज गठनको एपिडर्मरको रंग परिवर्तन गर्दैन। यस्तो neoplasms सजिलै संग र अनुहार देखि औंलाहरु संग palpated, खासकर यदि तपाईं प्रभावित अंग तिर झन्डै वा कमर मा मोडा।
गुर्दे को घातक नियोपाल्जस
बेनामी संरचनाका सबै यी चिन्हहरू कैंसरको विकासमा गवाही गर्न सक्छन्। थप रूपमा, निम्न क्लिनिकल अभिव्यक्तिहरू उपस्थित हुन सक्छन्:
थकान र कमजोरी;
बिग्रेको वा भूख को हानि;
शरीरको तापमान 37-38 डिग्रीमा वृद्धि
उच्च erythrocyte अवशोषण दर;
आन्तरिक अङ्गहरूमा स्पष्ट क्षति (घातक सेल क्लस्टरहरूमा मेटास्टेसहरूको कारण)।
व्यावसायिक निदान को बिना, यो गम्भीर ट्यूमर विकसित गर्दछ कि निर्धारित गर्न असंभव छ-प्रश्न मा रोग विज्ञान को लक्षण र उपचार सीधे ट्यूमर को प्रकृति मा निर्भर गर्दछ। मूत्र प्रणाली को कुनै पनि रूपहरु को अध्ययन र थेरेपी दुई चिकित्सकहरु, एक युरोलोजिस्ट र नेफोलोजोजिस्ट द्वारा संचालित गरिन्छ। असुरक्षित कोशिकाहरूको घातक जमावटको अन्वेषण गर्दा, एक oncouologogist परामर्श गर्नु पर्छ।
गुर्दे को निदान - ट्यूमर
अल्ट्रासाउन्ड र कम्प्युम टमोग्राफी संदिग्ध नेपोलस को लागि मुख्य र अधिक जानकारीपूर्ण अध्ययनहरू हुन्। तिनीहरूले विकासको प्रारम्भिक चरणमा पनि एक सानो गुर्दे ट्यूमर पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ। कहिलेकाहीं नेफ्रोस्कोटिग्राफिक पनि प्रदर्शन गरिएको छ - रेडियोमार्गिक तयारीको प्रारम्भिक परिचयको साथमा गामा क्यामेराको माध्यमबाट संगठनको ग्राफिक प्रदर्शन।
गुर्देको क्यान्सरको निदानले निम्न अध्ययनहरू समावेश गर्न सक्छ:
विपरीत एजेन्सीको साथ चुम्बकीय अनुलन इमेजिङ;
चुनिंदा रेडल आर्गोग्राफी;
घातक संरचनाहरू मेटास्टेसिज र प्रणालीगत विकारहरूको कारणले गर्दा नै निदानको सूची समावेश गर्दछ:
रगत र मूत्रको विश्लेषण
खोपड़ी र रीइनको गणना गरिएको टमोग्राफी।
गुर्दे मा ट्यूमर - के गर्न को लागी?
यस समस्याको साथ रोगीहरूको उपचार गर्ने रणनीतिहरू neoplasms को प्रकृतिमा निर्भर गर्दछ। सानो आकारको बेनाइन ट्यूमर जसले कुनै पनि लक्षणहरू गर्दैन, विकास र विनाशको कारण होइन, केवल अवलोकन र नियमित अल्ट्रासाउन्ड परीक्षाको विषय हो। ठूला संरचनाहरू जुन मूत्र प्रणालीको सामान्य प्रकार्यमा हस्तक्षेप गर्न वा तिनीहरूको गुणस्तर परिवर्तन गर्न सक्षम हुन्छन् शल्यक्रिया हटाउन हुनेछ।
स्थिति जटिल छ यदि गुर्दे को घातक ट्यूमर को निदान गरिन्छ - यस मामला मा उपचार प्रत्येक व्यक्ति को खाते मा लेने को लागि व्यक्तिगत रूप देखि चयन गरिएको छ:
जीवको सामान्य अवस्था;
उपस्थिति र मेटास्टेसहरूको संख्या;
ट्यूमरको आकार र स्थान;
अवस्थित पुरानो रोगहरू;
लक्षित अंगहरू र अन्य संकेतकहरूलाई क्षतिको डिग्री।
शास्त्रीय केमोथेरापी र विकिरण जोखिमले गुर्देको क्यान्सरको विरुद्धमा प्रभावकारी हुँदैन। तिनीहरू केवल अपर्याप्त ट्यूमरका लागि प्रयोग हुने उपायहरूको रूपमा प्रयोग गरिन्छ जुन एक अपमानजनक रोगीको जीवनको समर्थन गर्दछ। यसको अतिरिक्त, एक औषधीय परिसर निर्धारित गरिएको छ - इम्युनोमोड्युलेटर (अल्फा-इन्टरफेरोन, 5-फ्लोरिअरेसिलसँग इन्टरुलुकिन -2) र हार्मोनल उपचार (ओक्सप्रोसेस्टर)।
सर्जरीले ट्यूमर संग गुर्दे हटाउन
सर्जिकल हस्तक्षेपले नजिकैको ऊतकका साना क्षेत्रहरु संग संपूर्ण संरचना गठन को उत्साह शामिल हुन सक्छ या पुरा अंग को हटान सक्छ। कुन सञ्चालनलाई रोजगारीका लागि मात्र मापदण्ड गुर्देमा गरिन्छ यसको विशेषताहरू संग एक ट्यूमर हो। रेडिकल नेफुथमेमी (आसन्न संरचनाहरु संग अंग को पूर्ण हटान) गरिन्छ यदि नेप्लस निम्न विशेषताहरु मध्ये एक छ भने:
धेरै ठूलो आकार;
रेडियल पोतहरू नजिकैको स्थानीयकरण;
ओपरको प्रकारको अप्ठेरोमा अन्तिम निर्णय oncouologogist द्वारा बनाईएको छ। द्विपक्षीय नेफेरोमेटोमीले एक व्यक्तिको असक्षमतामा जान्छ, तर केहि परिस्थितिहरूमा खुलासा सर्जिकल हस्तक्षेपले रोगीको जीवनलाई लामो समयसम्म रोक्न एकमात्र तरिका हो र क्यान्सर, स्पिन र फेफड़ोंको क्यान्सरका अंगहरूमाथि व्यापक र अपरिवर्तनीय क्षतिलाई रोक्न।
गुर्दे ट्यूमर को लापरोस्कोपी
हल्का सर्जरी विशेष माइक्रोस्कोपी उपकरण द्वारा पेट प्यानल मा सानो पनचर को माध्यम ले गरिन्छ। यो सानो आकारको बेनाग गुर्दे ट्यूमरको लागि सिफारिस गरिएको छ, यदि कोशिकाओं को रोग संकलन को कैंसर र वृद्धि मा वृद्धि को लागि प्रकोप छैन। यो प्रकारको सर्जिकल हेरफेरले अंगको संरक्षण र रोगीको द्रुत फिर्ती सामान्य जीवनमा सुनिश्चित गर्दछ। सञ्चालनको समयमा, गुर्देको ट्यूमर र वरपरको ऊतकको पतली तह हटाइयो। यसले बेनाइन सेल्युलर संरचनाहरूको पुन: गठन रोक्न मद्दत गर्दछ।
गुर्दे को क्यान्सर ट्यूमर संग हटा दिए पछि पुनर्वास
एकपक्षीय नेफेरोमेक्समेन्टको कारण, दोस्रो जोडाका अंग मूत्र प्रणालीको सम्पूर्ण बोझमा लिन्छ। माथिल्लो प्रक्रियाबाट आएको व्यक्तिको मुख्य कार्य स्वस्थ गुर्दे को कार्यहरु लाई संरक्षित गर्न को लागी छ। सिफारिस गरिएको:
दैनिक हिड्ने यात्राहरू;
सुपरकूलिंग को दमन;
कुनै पनि संक्रामक रोगहरू विरुद्ध संरक्षण;
एक नेफ्रोलिकोजिस्ट वा युरोलोजिस्ट संग नियमित परीक्षा।
ट्यूमर संग गुर्दे को हटान पछि आहार को कम प्रोटीन सामाग्री संग पाचन भोजन शामिल हुनु पर्छ। आहारको आधार हो:
माछा र मासुको कम-मोटो किस्महरू;
केहि खानीको दूध उत्पादन;
फलफूल र सब्जिहरु।
सबै भाँडा भाप, उबलिएको, पखाले वा पकाएको छ। यो पूर्ण रूपमा हटाउन यो महत्त्वपूर्ण छ:
फ्राइड र फैटी फूड्स।
गुर्दे पूर्वानुमानमा ट्यूमर
उपचारको प्रभावकारिता पाँच वर्षको बाकी अवधिको भित्र मूल्याङ्कन गरिन्छ। यदि प्रारम्भिक अवस्थाहरूमा नियोपल्ज पत्ता लगाइएको छ भने, यो 70-80% हो। यदि गुर्दा रेजहरू प्रक्रियामा संलग्न थिए भने, सूचकमा 40-60% घट्छ। जब क्षेत्रीय लिम्फ नोड्स प्रभावित हुन्छन्, 5-20%। क्यान्सर विकासको पछिल्ला चरणहरूमा, भविष्यवाणीहरू खराब छन्, 95% रोगहरू नेफेरोमेमीमा5वर्ष भित्र मर्छन्। सही मूल्याङ्कनको लागि यो एक डाक्टरसँग परामर्श गर्न महत्त्वपूर्ण छ यदि घातक गुर्दे ट्यूमर पत्ता लगाइएको छ - यस्तो निदानको साथ कति धेरै लाइभ हुन्छ, विशेषज्ञले अधिक सही जवाफ दिनेछ।
एलर्जी rhinitis - उपचार
छालाको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा
Darsonval - विनाशकारी
आहारहेथेरेपी - संकेत र विनाशकारी
चिकनी छालाको माइक्रोस्पोरिया
कब्ज - कारणहरू र उपचार
जोड़ों को क्रंच किन हुन्छ?
के म रगत दिन अघि मेरो दाँत ब्रश गर्न सक्छु?
आँखा आइपियोपिन छोड्छ
मेकअप डोर 2014 को स्प्रिंग संग्रह
अनानास संग गरम सैंडविच
ग्रीवाको बृहत् विघटन
सिस्टाइटिसको लागि नाइट्रोक्सोलिन
हिरण संग स्कार्फ
एक व्यापारी महिलाको लागि लुगा
टम क्रूजले आफ्नो आमालाई दफन गर्यो
तपाईंको कपालको हेरचाह कसरी
एक बेजस्ता स्कर्ट कसलाई लगाउने?
स्लोभेनियामा स्की रिसोर्ट्स
किन सीरम उपयोगी छ?
ग्रेनाडा-डव प्रकृति रिजर्व
तल बस्नुहोस्,59: 30 भन्दा राम्रो बालबालिकाका विद्यालय नोटबुकमा जवाफहरू
परदे को लागि लचीला कोरेज छत
तम्बू कसरी बनाउने?
बहुविध मा पोर्क बेक्ड
Anda 1972 संग्रहालय
अनीता लुत्तेनको साथ स्लिम गर्दै
इरीना शेक र ब्राडली कूपरको बच्चाको नाम र लिङ्ग
© 2021 ne.unistica.com